Ndeipi Imbwa Yakanyanya Kukodzera Kune Munhu MuWheelchair? | Karman® Mawiricheya
Ndeipi imbwa inonyanya kukodzera munhu mune wiricheya is kazhinji Akapindura achizvininipisa. Vazhinji vachati iyo Goridhe Retriever kana iyo Labrador ndiyo yakanakisa nekuti ndiwo anonyanya kuzivikanwa marudzi ekubasa. Nekudaro, vamwe vanozoona kuti avo masimba esimba anogona kunge asina kunyatsoenderana nemhando idzi.
Zvisinei, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvokusarudza kubva asi mhando gumi dzakanakisisa dzakawanikwa kuti ndidzo dzakakodzera kwazvo
Imbwa dzeGomo reBernese
"Anodheerera Anobereka" kana nhubu dzinosanganisa musanganiswa
Icho chikonzero nei aya akanyanya kukodzera anouya pasi Kudzidzira, Hunhu, uye Saizi.
Sunga uye kufamba imbwa dzebasa rudzi rwakakosha rwemubatsiri imbwa iyo inonyanya kudzidziswa kubatsira yavo remara mubati ane yavo kufamba. Idzi imbwa dzinobatsira vanhu kuwana zvisati zvamboitika zverusununguko uye rusununguko.
Yakashongedzwa uye kufamba imbwa dzinofanirwa kugona kudzidziswa kuitira kuti dzirambe dzakatarisa nekubatsira pese pazvinenge zvichidikanwa. Mhando dzakawanda dzinogona kudzidziswa kuita zvidobi asi kwete ese marudzi anogona kunyatsoita basa iro muridzi wawo raanoda kuti riite.
Humwe hunhu hunodiwa neakasungwa uye kufamba imbwa hadzina kutya, kutya, kushushikana, reactivity uye mazhinji hukasha hwakakosha mune chero mamiriro ezvinhu avanosangana nawo. Kana vane kutya mune chero mamiriro ezvinhu muridzi anogona kukuvara kana imbwa ikapindura nekumhanya kana kurwisa. Ivo vanofanirwa kuve vasina kunyara kuitira kuti vave nechokwadi chekuti ivo vanogona kutarisisa pakubatsira muridzi pasina zvinokanganisa.
Idzi imbwa dzinofanirwa zvakare kudzidza kuti dzisashandise hunhu hwadzo hwepamoyo sekubira, kurwa kana kutamba. Ivo vanofanirwa kuve vakasununguka uye kushamwaridzana asi kwete simbe. Panguva ipi neipi hazvifanirwe izvi mhando yeimbwa ive nehasha kune chero chisikwa kana munhu; ivo vanofanirwa kuve vane hushamwari uye vanoramba vakatarisisa nguva dzose. Kukura kwembwa ndiko zvakakosha zvakare nekuti ivo vanofanirwa kugona kubatsira muridzi mumabasa akaita sekumuka, kuvhura madhoo kana kutora zvinhu zvakadonhedzwa pasi.
Kusvika kumarudzi ose aya akanyorwa pamusoro apa ndiwo anosangana nehunhu uhwu zvakanyanya. Vane chaizvo mabasa anokosha uye izvi mhando yerudzi inowanzo kuve yakanakisa pairi, zvisinei, zvavanoda zvinofanirwa kuzadzikiswa zvakare. Imbwa zhinji dzinoda yakawanda kusimbisa muviri kuitira kuti ugare uine hutano uye hyperness yakaderera. Kushambidzika ndechimwe chinhu chekufunga nezvacho sezvo dzimwe imbwa dzinoda kushambidzika kupfuura dzimwe kuti dzive nehushe hwakachena, ganda rinopenya, hutano hwakanaka.
Kune mapoka akati wandei anogona kubatsira vanhu vanoda kusungwa uye kufamba imbwa yebasa kuona kuti vakadzidziswa uye vakagadzirira kushandira. Zvinogona kuve zvakaoma kuwana imbwa yebasa iwe pachako sezvavari priced yakakwirira uye iyo mutengo zvakawanda kuti vadzidziswe. Uye zvakare, imbwa idzi dzinoda chikafu chepamusoro kuitira kuti vagare vakagwinya kuti vaite mabasa avo zvinobudirira uye zvakanaka. Kugovera chikafu inopa ganda rine hutano, furhu, kuona, kunzwa, uye kuita.
Dzvanya apa kuti uwane matipi ekuti imbwa yako igadzikane nechigaro chako:
Kuti udzidze nezve zvimwe zvipfuyo zve vanoshandisa wiricheya tarisa chinongedzo pazasi: